राष्ट्रिय वन सर्वेक्षण २०१६ का प्रमुख नतिजाहरु ः
-नेपालमा वनले ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर भू–भाग ओगटेको छ, जुन नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४०.३६% हुन आउँछ । भने अन्य काष्ठ तथा बुट्यानक्षेत्र (Other Wooded Land) ६ लाख ४८ हजार हेक्टर (४.३८%) रहेको छ ।
-नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये वनक्षेत्र र अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र दुबैले गरी ४४.७४% भू– भाग ओगटेको छ ।
-कुल वन क्षेत्रफलमध्ये संरक्षित क्षेत्र भन्दा बाहिरको भागमा ४९ लाख २९ हजार हेक्टर (८२.६८ %) र संरक्षित क्षेत्रमा १० लाख ३३ हजार हेक्टर (१७.३२%) वन रहेको छ ।
-कुल वन क्षेत्रफलको ३७.८०% मध्यपहाडी भौगोलिक क्षेत्रमा, ३२.२५% उच्चपहाडी तथा उच्चहिमाली क्षेत्रमा, २३.०४% चुरे क्षेत्रमा र ६.९०% तराई क्षेत्रमा अवस्थित छ । यसैगरी अन्य काष्ठ तथा बुट्यानक्षेत्र मध्ये तराई, चुरे, मध्यपहाडी र उच्चपहाडी तथा उच्चहिमाली भौगोलिक क्षेत्रहरुमा क्रमशः १.४७%, ३.५०%, ९.६१%, र ८५.४२% रहेको छ ।
2 Career News and Info श्रावण २५, २०७४
3 विश्वकप ट्रफी नेपालमा
4 राष्ट्र भनेको के हो ?
5 लिभ टुरिजम
6 लैङ्गिक समानता र लैङ्गिक समता
7 Career News and Info असार २७, २०७४
9 होम स्टे (Home Stay) भनेको के हो ?
10 चुनावी मन्त्री परिषद २०६९